सौतेनी आमाले ८ बर्षको बालकलाइ झुन्डाएर मारेको आरोप, साली भेना कोठामा सुतेका रहेछन, सत्य के हो ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
सौतेनी आमाले ८ बर्षको बालकलाइ झुन्डाएर मारेको आरोप, साली भेना कोठामा सुतेका रहेछन, सत्य के हो ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki May 21, 2021
बालक दियाली घर अगाडि सलको पासो लगाई आत्महत्या गरेको अवस्थामा शव भेटिएको थियो । घरभित्र बुवा कुमार सुतिरहेको अवस्थामा छोरा पवनले आत्महत्या गरेका थिए । आत्महत्या गरेपछि छरछिमेकी भेला भएपछि मात्रै बुवा कुमारले पत्ता पाएका थिए । छिमेकीहरुले समेत ८ बर्षको बालकले आत्महत्या गर्न नसक्ने र घटना रहस्यमय भएको बताएका छन् । यता जेठी आमा पक्षहरुले घटना सुनियोजित रुपमा भएको र दोषीलाई हदैसम्म कार्वाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई माग गरेका छन् । आखिर सत्य के हो आमा संग गरिएको कुराकानी तल भिडियोमा हेर्नुहोला ।